Llama တံတွေးထွေးတံတွေးထွေး | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Llama တံတွေးထွေးတံတွေးထွေး
Llama တံတွေးထွေးတံတွေးထွေး APK ကို
အဆိုပါတံစို့အပေါ်ပါ! ရှုံးနိမ့် hipster ရန်သူများကိုသငျသညျဒင်္ဂါးပြား, ပါဝါ-ups နှင့်အရူး llama ဝတ်စုံစုဆောင်းအဖြစ်။ Lllama-tastic ရမှတ်ဒီတော့သင်တို့အဘို့အဘယ်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းနေကြတယ်, ဦးဆောင်ပေါ်တွင်သင်ဆင်းသက်နိုင်သလဲ တံထွေးထွေးခြင်းရယူပါ!
• Nickelodeon ရဲ့ hit ပြပွဲ၏ရာသီ2ကနေအစစ်အမှန်ဂိမ်း Play: GAME SHAKERS!
•ပွတ်ဆွဲနှင့်ဤအဆုံးမဲ့ Arcade သေနတ်သမား၌ရန်သူအနိုင်ယူဖို့တံစို့
•အရူးဂိမ်း Shakers ကမ္ဘာမှတဆင့်ဇစ်!
•သတင်းထုတ်ပြန်ချက် Llamageddon သင့်ရဲ့ hipster အကြီးအကဲတွေအပေါ်!
•သင် play အဖြစ်အရူး llama ဝတ်စုံနှင့်အခမဲ့ဖြစ်သည်လက်ဆောင်တွေသော့ဖွင့်ကတက်ပြောင်းနည်း!
• DJ သမားပင်ဂွင်းငှက်များနှင့် Keyboard ကို Kitty!
ဒီ app များအတွက် End User License Agreement အငြင်းပွားမှုများဘို့ခုံသမာဓိတို့ပါဝင်သည် - အမေးအဖြေများကိုတွေ့မြင်: http://www.nick.com/faqs/
သတိထား! အဆိုပါ Clamburglar သငျသညျကဲ့ရဲ့နှင့်သင့်ပစ္စည်းပစ္စယခိုးယူဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ခဲ့သည်! သင့်ရဲ့လက်စားချေခြင်းနှင့်ဒင်္ဂါးပြား၏ကသီရဖို့ llama တံစို့နှင့်အတူသူ့ကိုပေါက်ကွဲမှု!
- NEW! Clamburglar ရန်သူ
- ပါဝါ-ups နှင့်ဒင်္ဂါးပြားကောက်ဖို့အခွင့်အလမ်းများအတွက် Clamburglar ရှုံးနိမ့်
- Bug ပြုပြင်မှုများနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်တိုးမြှင့်မှုများ
54.66 ကို MB